Xog Cusub..Muqdisho Intii Aan Naqaanay Waa Dhaaftay! | Xaqiiqonews
Xog Cusub..Muqdisho Intii Aan Naqaanay Waa Dhaaftay!
Muqdisho ayaa wajaheysa “xaalad laga walwalo”, ka dib murankii doorashooyinka oo u muuqdo kuwa hadda isku sii badalaya gacan ka hadal, Haddaba maxaa ka socda daaha ka gadaal maxaa laga filan karaa?
Warka: rasaas culus oo saqdii dhaxe xalay la is waarsaday ka dib, waxaa wili kacsan xaaladda magaalada, hadalo kala duwan ayaana ka soo baxaya dhinacyada isku haayao caasimadda.
Dhammaadkiisa: Xasan Cali Kheyre oo ka mid ahaa siyaasiyiin iyaga oo dibadbaxayo rasaas la huwiyey ayaa dhacdadaasi ku sifeeyey “isku day dil”, waxa uuna sheegay in uu jiro hal xal oo looga gudbi karo khilaafka taagan, isaga oo yiri “waxaa harsan oo kaliya in dadka xal doonka ay iska hor wareejiyaan kuwa caqabadda ah”.
Daawo: muuqaalka dibadbixii xabadaha loo adeegsaday. Cali Aadan Muumin
Posted by Cali Aadan Muumin on Friday, February 19, 2021
Xog hoose oo meelo kala duwan laga soo xigtay ayaa sheegeysa in qolyaha mucaaradka ay wadaan abaabul hubeysan, CC Shakuur oo ka mid ahaa mucaaradkii iyaga oo dibadbaxayo la rasaaseeyey ayaa yiri “Dagaalka ay rabaan Farmaajo iyo fahad yaasiin waa lala galayaa”.
Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa ku dhawaaqay in aysan tartan la galeynin Farmaaajo iyagoo ku tilmaamay “maxkamad suge”.
Ciidamada gorgor iyo Haramacad oo ku hubeysan gawaarida gaashaaman ayaa xirtay inta ugu badan wadooyinka muhiimka ah faras magaalada dhaca, daqiiqad walbana waxaa la filan karaa iska hor imaad hubeysan oo dhax mara dhinacyada is diidan.
Dhanka kale ajaanibta ku xugan Xalane ayaa dalbanaya in rasaasta laga fogeeyo aagga iyaga muhiimka u ah ee garoonka diyaaradaha iyo agagaarka xalane, waxaana jira xiriiro joogta ah oo ay la soo sameynayaan mucaarada iyo Df-ka, iyagoo dalbanaya in dagaalka laga fogeeyo.